Vaovao - ntroduction sy fampiharana ara-pahasalamana an'ny Laryngeal Mask Airway
Haiyan Kangyuan Medical Instrument Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny volana aogositra 2005. Any Haiyan County, Jiaxing, China no ivon-toeran'ny Delta Renirano Yangtze izay mandroso ara-toekarena ary akaikin'i Shanghai, Hangzhou sy Ningbo, ary koa Zhapugang -Jiaxing-Suzhou Expressway, Hangzhou-Ningbo Expressway ary Jiaxing South Station. Ny toerana misy azy ara-jeografika dia ambony, ary ny fitaterana dia mety sy haingana.
Izy io dia mandrakotra faritra iray manodidina ny 20000㎡ miaraka amin'ny efitrano fidiovana 100.000 hophophop444444 100 100 100 100 100.000 ary laboratoara 300㎡. Ny ambaratongan'ny orinasa dia miorina amin'ny indostria folo voalohany ao Shina Atsinanana. Ary ny fahaizan'ny famokarana sy ny varotra no telo voalohany tao Sina nandritra ny dimy taona nifanesy Ny vokatra dia nandalo ny ISO13485: 2016, ny fanamarinana CE Eraopeana ary ny FDA.
Fampidirana ny Laryngeal Mask Airway
Sehatra fampiharana: Ny làlan-dranon'i maskara Kangyuan dia mety amin'ny rivotra entina ho an'ny marary izay mila fanatoranana ankapobeny sy famelomana vonjy taitra, na hananganana làlambe artifisialy tsy voafaritra mandritra ny fotoana fohy ho an'ireo marary hafa mila miaina. Fampisehoana: Raha ampitahaina amin'ny vahaolana fanaraha-maso banga, ny fahasamihafana pH dia ≤1.5; ny vokatra dia tsy mitera-tena, voahitsakitsaky ny oxygène etilène, ary ny oksida etilena sisa dia tsy mihoatra ny 10μg / g.
1. Làlan-drivotra saribakoly laryngeal tokana ampiasaina amin'ny fampiasana tokana
Silika fitsaboana 100% ho an'ny biocompatibility ambony.
Ny famolavolana bar tsy epiglottis dia manome fidirana mora sy mazava amin'ny alàlan'ny lumen.
Tsipika zoro 5 no miseho rehefa eo am-pisaka ny cuff, izay afaka misoroka ny kofehy mandritra ny fampidirana azy.
Ny lovia lalina ao anaty cuff dia manome tombo-kase tena tsara ary hisorohana ny sakana ateraky ny epiglottis ptosis.
Ny fitsaboana manokana ny fonosana amin'ny cuffs dia mampihena ny fivoahana ary miova amin'ny fomba mahomby.
Raha tsy mampiasa glottis laryngoscopy, mampihena ny tratry ny tenda, ny edema glottis ary ny fahasarotana hafa.
Azo ampidirina mora foana, mila 10 segondra fotsiny hamahana ny olana amin'ny fifohana rivotra.
2. Làlan-tsarimihetsika laryngeal miorina amin'ny Tube-tokana
Tsipika zoro 5 no miseho rehefa eo amin'ny toerany fisaka ny cuff, izay afaka misoroka ny cuff amin'ny endriny mandritra ny fampidirana azy.
Ny fanamafisana ny tsiranoka dia manamaivana ny fanosehana na ny fanaovana kinking.
360 ° miondrika, fampisehoana fanoherana mahery vaika, mety amin'ny rivotra mandritra ny fandidiana amin'ny toeran'ny marary samihafa.
Ny tehina torolàlana miaraka amin'ny tsipika misy endrika dia voafantina hanamorana ny fampidirana ny LMA araka ny rafitra anatomika sy ara-batana ny vava sy ny tenda an'ny olombelona.
3. Fiaretan-dalamby laryngeal saribakoly tokana miaraka amin'ny Bar Epiglottis
Vita amin'ny silika fitsaboana ambaratonga 100% nafarana.
Tsipika zoro dimy no miseho rehefa eo am-pisaka ny cuff, izay afaka misoroka ny fonosana mandritra ny fampidirana azy. Ny endrika roa -piglottis-bara ao anaty lovia dia afaka misoroka ny sakana ateraky ny epiglottis ptosis.
Ny fitsaboana manokana ny fonosan'akanjo cuff dia mampihena ny fivoahana ary miova tsara.
4. Fiaretan-dalamby laryngeal saribakoly tokana miaraka amin'ny Bar Epiglottis
5. Làlan-drivotra saron-tava fanamafisam-peo miorina amin'ny fantsona roa
Misy fantsom-panafody sy fantsona roa misaraka, izay mifanaraka sy mifandray amin'ny lalan-driakan'olombelona sy ny esophagus, izay mampihena be ny fisian'ny reflux sy ny hetaheta, ary miaraka amin'izay dia manamora ny fametrahana sy ny fametrahana ny saron-tava laryngeal.
Ny fantsom-panafody tsy miankina amin'ny vavony dia afaka misitrika ny votoatin'ny vavony mba tsy hisian'ny loza ateraky ny reflux.
Mihatsara sy mihalehibe cuff inflatable, manamafy ny famehezana ny tenda, afaka mitondra rivotra tsindry tsara mandritra ny fotoana maharitra, ary manitatra ny fampiasana isan-karazany ny LMA.
Ny fonosana fonosana azo ampiasaina dia azo ampiasaina ho toy ny pad nify, mora amboarina, mila kasety fotsiny mba hamahana ny olan'ny fanamboarana.
Toro lalana hampiasaina:
1. Ny LMA, dia tokony hanamarina ny antsipirian'ny mari-pamantarana ny vokatra.
2. Manapotika ny gazy ao amin'ny làlan'ny lalan-drivotra masiran'ny laryngeal ka fisaka tanteraka ilay hood.
3. Asio masira masira kely na gel tsy voavahan-drano kely ho an'ny fanosotra ao aorian'ny fonon'ny tenda.
4. Nihemotra kely ny lohan'ilay marary, niaraka tamin'ny ankiben-tànany ankavia tao am-bavan'ny marary sy ny valan'ny valanoran'ilay marary, mba hanitarana ny elanelana misy eo am-bava.
5. Mampiasà ny tànana ankavanana hitazonana ny penina mitazona ny saron-tava laryngeal, mba hampisy azy, ny rantsan-tànana sy ny rantsantanana afovoany manohitra ny vatan'ny fifandraisana sy ny saron-tava laryngeal fantsom-panafody, manarona ny vava mankany amin'ny lalana manaraka ny tapaky ny valanorano ambany, lela miraikitra amin'ny pharyngeal LMA, mandrapahatongan'ny tsy mandroso intsony hatreto. Azonao atao ihany koa ny mampiasa ny fomba fampidirana ny saron-tava laryngeal, manarona ny vavanao mankany amin'ny lanilaniny fotsiny, dia hapetraka ao am-bava mankany amin'ny tenda eo am-pototry ny saron-tava laryngeal, ary 180 ° aorian'ny fihodinana, ary avy eo manohy manindry ilay laryngeal saron-tava, mandra-pahatonga tsy afaka manery hatreto. Rehefa mampiasa ny saron-tava laryngeal nohatsaraina na ProSeal miaraka amin'ny tehina mpitari-dalana. Ny tsorakazo mpitari-dalana dia azo ampidirina ao amin'ny lavaky ny rivotra hahatratrarana ny toerana voatondro, ary ny fampidirana ny sarontava laryngeal dia azo alaina aorian'ny fampidirana ny sarontava laryngeal.
6. Mandritra ny hetsika alohan'ny tanana iray hafa moramora amin'ny fanindriana ny rantsan-tànana hisorohana ny famindran-toerana catheter saron-tava laryngeal.
7. Araka ny fiampangana nomeny ny fonosana feno gazy (ny habetsaky ny rivotra dia tsy mihoatra ny refy farany famenoana), ampifandraiso ny faritry ny fisefoana ary zahao raha tsara ny rivotra, toy ny rivotra na ny sakana, raha tokony ho araka ny dingana ampidirina indray. saron-tava laryngeal.
8. Mba hanamafisana ny toerana misy ny saron-tava laryngeal dia marina, manarona ny takelaka nify, toerana raikitra, mitazona rivotra.
1. Ireo marary izay azo inoana fa feno ny vavony na ny vavony, na ny fahazarany mandoa sy ny marary hafa mora reflux.
2. Ireo marary voan'ny edema laryngeal, mamontsina ny lalan-pisefoana ary ny vavonin'ny pharynx.
3. Ny aretin-tenda dia miteraka fisakanana amin'ny làlambe, mampihena ny fanarahana ny havokavoka, na fanoherana ny lalan-drivotra avo, olona izay mila fivoahan'ny tsindry miabo.
4. Ireo marary voan'ny terrain-trachea ary mihalefaka ary misy sakana amin'ny lalan-drivotra aorian'ny fanatoranana.
5. Ireo izay tsy mahazaka akora vokatra.
6. Ireo marary heverin'ireo mpitsabo ho tsy mendrika amin'ity vokatra ity.
Fampiharana ara-pitsaboana saron-tava laryngeal:
Ny fitaovam-pitaterana dia tokony hadio sy hadio ary ny loharanon'afo dia tokony hitokantokana. Ny vokatra dia tokony hotehirizina amin'ny hamandoana somary mihoatra ny 80%, ny mari-pana dia tsy mihoatra ny 40 degre Celsius, tsy misy gazy manimba ary efitrano madio madio tsara. Halaviro ny tara-masoandro mivantana, ary fady mafy ny mitahiry azy miaraka amina zavatra misy poizina sy mampidi-doza.